नाकले टाइप गरेर दुईवटा विश्व रेकर्ड
कम्प्युटरको कि बोर्डमा तिव्र गतिमा हात दौडाएर निकै छिटो छिटो टाइप गर्ने कतिपय मानिसहरुको गति देख्दा हामी अचम्ममा पर्छौँ । हातले टाइप गर्दा त अचम्ममा परिन्छ भने यदि कसैले हातको
श्रीमतीलाई लोग्नेको एलर्जी, सँगै बस्छन् तर मोबाइलमा कुरा गर्नुपर्छ
जीवनमा सबैभन्दा नजिकको सम्बन्धमा रहनुपर्छ श्रीमान् र श्रीमती । एक अर्काबीच सहवास, सहभोज, सहअस्तित्व, सहकार्य, कुराकानी, मायाप्रेम आदि साटिन्छन्, दिनदिनै । तर जब सँगै जीवन बिताउने लोग्ने स्वास्नीबीच बोली नै
यस्तो देश जहाँ रातो मसिले लेख्न सख्त मनाही छ
हरेक ठाउँका आफ्ना केही अन्धविश्वास तथा परम्परागत मान्यता हुन्छन् । नचाहँदा नचाहँदै पनि हामी कैयौँ अन्धविश्वासप्रति विश्वास गर्छौँ । बिरालोले बाटो काट्यो भने हिँडिरहेको अवस्थामा केही बेर रोकिन्छौँ हामी ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पले लिए सपथ
काठमाडौं, ८ माघ । अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन् । नेपाली समयअनुसार शुक्रबार राती पौने ११ बजे उनले अमेरिकाको ४५ औं राष्ट्रपतिको रुपमा पद
सिंगै गाउँ बिक्रीमा, मूल्य २८ करोड
तस्वीरमा देखिएको सुन्दर गाउँ विक्रीमा छ । किन्न चाहनेले २८ लाख डलर (करिब २८ करोड रुपैयाँ) ठिक पानुपर्ने छ । यो गाउँ क्यानडाको प्रख्यात सहर भ्यान्कुवरबाट केही किलोमिटरको दुरीमा अवस्थित
युवतीहरुलाई जनवारजस्तै बाँधेर हिँड्ने व्यक्ति पक्राउ
नाइजेरिया – युवतीहरुलाई घरपालुवा जनवारजस्तै सिक्रीमा बाँधेर हिँड्ने नाइजेरीको लागोसस्थित एक नाइटक्लबको मालिक माइक इजे–नवाली न्वगु पक्राउ परेका छन् । प्रटी माइक भनेर चिनिने न्वगुले युवतीहरुलाई ‘घरपालुवा जनवार’ बनाएर विगत
जिन्दगीभरी नुहाउँदैनन्, तर पनि सुन्दरी कहलाउँछन्
तपाईं ननुहाइकन कति दिन बस्न सक्नुहुन्छ ? दुई चार दिन नुहाएन भने जिउ सक्सकाउन थाल्छ होला । तर संसारमा यस्ता मानिसहरु पनि छन् जो जीवनभर नुहाउदैनन् । प्रसंग हो, अफ्रिकाको
छात्राहरुले पनि उभिएर पिसाब फेर्नुपर्ने !
चीनको एउटा विश्वविद्यालयले छात्राहरुलाई उभिएर पिसाब फेर्न प्रेरित गरेको छ । विश्वविद्यालयमा छात्राहरुको लागि पनि पुरुषको जस्तै ‘युरिनल’ जडान गरिएपछि सबै छक्क परेका छन् । चीनको उत्तर–पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको सान्सी
८ सय बच्चा भएका पुरुष्, हरेक हप्ता बन्छन् नयाँ बच्चाको बाउ
तपाइँलाई अचम्म लाग्यो होइन ? कुनै पुरुष के ८ सय जना बच्चाको बाउ बन्न सक्छ ? अझ हरेक हप्ता एउटा नयाँ बच्चाको बाउ बन्ने हैसियत कुन मर्दले राख्ला ? आमपुरुषको
अन्तिम संस्कार गर्दा गर्दै ‘मृतक’ उठेपछि
मरेको भनेर कफिनमा राखिएका व्यक्ति एकाएक जुरुक्क उठेपछि देख्नेहरु स्तब्ध बनेका छन् । यो चीनको सिचुवान प्रदेशस्थित जुनलियान काउन्टीमा भएको घटना हो । ‘सास फेर्न रोकिएको र हात(गोडा चिसा भएको’